गरिवी घट्यो, आम्दानी बढ्यो – Rara Khabar
गरिवी घट्यो, आम्दानी बढ्यो
सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा उच्च मूल्य कृषि बस्तुको उत्पादनले गरिवी घटाएको छभने आम्दानी बढाएको छ । स्याउ, अदुवा, खसीबोका, बेमौसमी तरकारी, टिमुर, बेसार र तरकारीको वीऊ उत्पादनबाट ती जिल्लाका झण्डै १६ हजार कृषकहरुको आम्दानी बढाएको छ । आम्दानी बढेसंगै गरिवी दरपनि घटेको छ ।
उच्च मूल्य कृषि विकास बस्तु आयोजनाले २०६८ सालमा सुर्खेतसहित दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र अछाममा उच्च मूल्य कृषि बस्तुको उत्पादनमा विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । सात बर्षको अवधिमा उनीहरुको आम्दानी प्रति परिवार १० हजारले बृद्धि भएको छ । आयोजना सुरु गर्दा कृषकहरुको आम्दानी बार्षिक ३० हजार थियोभने अहिले ४० हजार पुगेको छ ।
उत्पादन बढेपछि आम्दानी बढेको र जसका कारण गरिवी दर घटेको छ । कार्यक्रम लागू पूर्व अति गरिव २६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो पाँच प्रतिशतमा घटेको छ । यस्तै ४४ प्रतिशत रहेका मध्यम गरीहरु घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिले खान पुग्नेको संख्या १० प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३५ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
माउण्ड डिजिट प्रालिले गरेको अनुसन्धानका क्रममा उच्च मूल्य कृषि विकास बस्तु आयोजनाले करिव १६ हजार कृषकहरुको बार्षिक आम्दानी बढेको र जसका कारण गरिवी पनि घटेको जनाएको छ । ६ महिना लगाएर गरिएको सो अनुसन्धानमा आयोजना लागू भएका किसान, समूह सहकारी, व्यापारी, कर्मचारी र सरोकारवालासंग भेट गरेको थियो । प्रालिका टिम लिडर डा. मधुसुदन भटराई र डा. निर्मल विश्वकर्माले सो अनुसन्धान गर्नुभयो । अनुसन्धानबाट ती जिल्लाहरुमा सवैभन्दा धेरै तरकारीको बीऊका कारण आम्दानी बृद्धि भएको पाइएको हो । तरकारीको बीऊमा आठ गुणा, बेमौसमी तरकारीमा सात गुणा, टिमुरमा छ गुणा, स्याउ र बेसारमा समान तीन गुणा र अदुवा, खसीबोकामा पनि समान दुई गुणा आम्दानी बृद्धि भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
आयोजनाले उच्च मूल्य कृषि बस्तुमा ६५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । १३ हजार ५०० घरधुरीलाई लक्षित गरी थालिएको कार्यक्रममा १५ हजार ९६५ घरधुरी लाभान्वित भएको आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद भारीले दावी गर्नुभयो । आयोजनाले सवैभन्दा बढी बेमौसमी तरकारीमा लगानी गरेको थियो । यसमा २८ करोड ९६ लाख लगानी भएको थियो । त्यसपछि खसीबोकामा १३ करोड १८ लाख, स्याउमा आठ करोड ९८ लाख, अदुवामा पाँच करोड तीन लाख, टिमुरमा दुई करोड चार लाख, बेसारमा दुई करोड ५६ लाख र तरकारीको बीऊमा दुई करोड ४३ लाख रुपैयाँ लगानी आयोजना गरेको जानकारी प्रमुख भारीले दिनुभयो ।
आयोजनाका कार्यक्रमबाट १६ प्रतिशत दलित लाभान्वित भएका छन् । त्यसपछि १५ प्रतिशत जनजाति र अन्य ६९ प्रतिशत लाभान्वित भएका छन् ।
प्रकाशित मितिः १९ कार्तिक २०७५, सोमबार २१:१७